🥇 aza ajụjụ maka ụgwọ akwụmụgwọ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 730
aza ajụjụ maka ụgwọ akwụmụgwọ
Video aza ajụjụ maka Ebe E Si Nweta ụgwọ
Mgbe ịmalite mmemme, ị nwere ike ịhọrọ asụsụ.
Dezie ajụjụ maka ụgwọ akwụmụgwọ
Accountingkwụ ụgwọ ụgwọ akwụmụgwọ na USU Software bụ nkwado zuru oke na ụkpụrụ njikwa akaụntụ, nke na-ekewa ụgwọ ahụ, dabere na oge ịkwụghachi nke mgbazinye ego anabatara, dịka nkwekọrịta ahụ, n'ime ogologo oge - oge ịkwụ ụgwọ ụgwọ karịrị ọnwa 12 , na obere oge, mgbe a ga-akwụ ụgwọ ụgwọ ahụ tupu oge nke afọ ọ gwụ. Ọzọkwa, ọ bụghị nanị na ngalaba abụọ a ka a na-ahazi ụgwọ maka ụgwọ e nwetara. Nke a kpebisiri ike site na ọnọdụ nke nzukọ nke arụnyere ngwanrọ a, nke ọ bụla nwere ike iji ya na nkwekọrịta mbinye ego ahụ, n'agbanyeghị, ọ bụrụ na ị tụlee, na isiokwu nke mkparịta ụka bụ nzere natara, yana nyocha ha, ọ pụtara na anyị na-ekwu okwu banyere ụlọ ọrụ na-edekọ ndekọ nke mgbazinye ego natara.
A na-achịkwa njikwa ụgwọ dị ugbu a na ụgwọ enwetara na nchekwa data mgbazinye ego, ebe nnata ndị enwetara bụ akụkọ ihe mere eme ha, bido na ụbọchị ntinye akwụkwọ, nnabata ya na mbu, na ịnyefe ego na akaụntụ kwesịrị ekwesị, azụmahịa ụgwọ iji tụlee usoro na ego a ga-akwụ, ịkwụ ụgwọ ọrụ, na pasent. Ekele ọ bụla enwetara, nwere 'dossier' pụrụ iche na nchekwa data a nwere ọnọdụ e kenyere nke na-egosipụta ọnọdụ nke ụgwọ ahụ ugbu a, yana ọkwa, n'aka nke ya, kpebisiri ike site na agba, nke ndị ọrụ mmemme ji anya na-eleba anya na mmezu nke ọrụ. iji kwụghachi ụgwọ a. Debtgwọ ụgwọ na mbinye ego a natara nwere ọtụtụ ọnọdụ, gụnyere ịkwụ ụgwọ oge na oge, imebi usoro ịkwụ ụgwọ, igbu oge, ntaramahụhụ na ndị ọzọ. Onye ọrụ ahụ gosipụtara ọdịiche dị iche iche dị ka ogo nsogbu ha si dị, na-enweghị oge imeghe akwụkwọ ọ bụla iji mara nke ọma ụgwọ nke ụgwọ ahụ.
Nhazi nke ịkwụ ụgwọ nke ụgwọ na mgbazinye ego natara nke ọma mezuru otu isi ọrụ ya - ọ na-echekwa oge ndị ọrụ ma na-ahụ ihe ngosi arụmọrụ iji hụ nyocha ngwa ngwa nke usoro ọrụ, nke na-eme ka o kwe omume iwelie arụmọrụ nke usoro na arụ ọrụ ndị ọrụ, ịba uru nke ụlọ ọrụ ahụ, ebe ị na-ahazi ozi gbasara ụgwọ na ụgwọ ha nwetara ma hazie usoro nke nyocha ya. Ntinye nke nhazi nke ịkọwa ajụjụ nke ụgwọ na mgbazinye ego natara bụ nke onye nrụpụta rụrụ, emesịa ewepụta ihe ngosi dị mkpirikpi nke ike ngwanrọ niile, nke na-adịchaghị ole na ole, nke na-eme ka ndị ọrụ nwere onwe ha ịme ọtụtụ ọrụ kwa ụbọchị. , nke bụ isi na ntinye aka na nyocha. Yabụ, nke a bụ otu sistemụ arụmọrụ akpaghị aka ga-esi mee usoro ndị a n’onwe ha, na-enye ụlọ ọrụ ahụ izi ezi na ọsọ nke ịhazi data a ga-edekọ.
Ọzọkwa, ndị ọrụ anaghị etinye aka na nguzobe akwụkwọ ọ bụla. Nhazi nke ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ na ụgwọ ha nwetara na-eme ka ha nọrọ onwe ha, na-arụ ọrụ na data na sistemụ na ụlọ akụ nke etinyere n'ime ya, kwadebere n'ụzọ pụrụ iche iji rụọ ọrụ ndị a. Akwụkwọ a na-akpaghị aka na-agbaso ihe niile achọrọ, na-ezute arịrịọ na ebumnuche, nke a na-enyocha site na ozi na isi mmalite, nke e wuru n'ime usoro nyocha, ebe a na-achịkọta ndokwa niile, ụkpụrụ, ụkpụrụ, na ụkpụrụ, gụnyere nkwadebe nke nkwupụta ego. Isi ihe a na - eme nyocha oge niile banyere mmezigharị nke mmezigharị ọhụrụ na akwụkwọ usoro iwu dị ugbu a, nke na-atụle ma na-edozi ntọala na sistemụ n'onwe ya iji nweta nsonaazụ oge na nchịkọta na nkwadebe nke akwụkwọ. Nnweta nke ihe omuma na isi ihe omuma na-enyekwa ntọala nke ngụkọta oge, nke na-enye ohere ngụkọta akpaka ebe ọ bụ na ọrụ ọ bụla na-enweta nkwupụta uru na-atụle ụkpụrụ ndị e guzobere na ụlọ ọrụ ahụ ma gosipụta na isi.
Ibu ọrụ nke ndị ọrụ gụnyere naanị otu ọrụ - mgbakwunye oge na usoro ihe omume nke ọgụgụ ha nwetara mgbe ị na-arụ ọrụ ọrụ n'ime ikike. Na ndabere ha, sistemụ arụmọrụ na-akpaghị aka na-eme nyocha ngwa ngwa nke akara ngosi ugbu a metụtara mgbanwe natara, na-emezigharị nkọwa nke usoro dị ugbu a, ya mere, ọ nwere mmasị na nnata nke ozi mbụ na nke ugbu a site n'aka ndị ọrụ, na-akpali ha ịmalite ọrụ sonye na usoro ntinye data site na ịgbakọ ụgwọ ọrụ nke onye ọrụ na-akpaghị aka, na-atụle olu ọrụ edenyere aha na ndekọ elektrọnik. N'otu oge ahụ, ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ụdị eletrọnị nke onwe ha, ozi edepụtara na ha bụ akara nbanye, nke onye ọ bụla na-anakọta yana paswọọdụ nche iji banye mmemme ahụ iji kpuchido nzuzo nke ozi gọọmentị, ya mere, na-ebu nke onwe ibu ọrụ maka ogo data ha na oge nke ntinye ha n'ime sistemụ.
Na mgbakwunye na isi nke kredit, CRM gosipụtara dị ka ndị ahịa, ebe a na-ahazi ọnụ ọgụgụ nke mmekọrịta ha na ha, a na-achịkọta akụkọ gbasara kọntaktị zuru ezu site na oge ndebanye aha. Faịlụ nkeonwe ọ bụla nwere data nkeonwe, kọntaktị, ebe nchekwa nke akwụkwọ, foto, na ndepụta zuru ezu nke ọrụ a na-arụ site na ụbọchị - oku, leta, nzukọ na ntinye ego. CRM na-echekwa onyinye niile enyere onye ahịa, ederede nke mailings ezigara, akwụkwọ nke njirimara njirimara, yana foto sitere na kamera webata.
Iji hụ na mpụga mmekọrịta, electronic nkwukọrịta ọrụ na ọtụtụ formats - Viber, SMS, e-mail, oku olu, nke na-eji na-akwado nzipu ozi na-ezisa. A na-agwa onye ahịa ahụ na-akpaghị aka dabere na ụbọchị ntozu akọwapụtara na nchekwa data ụgwọ akwụmụgwọ. E nwere ihe ncheta nke ụbọchị na ego nke ịkwụ ụgwọ, ngosi nke ntaramahụhụ. A haziri ozi maka ebumnuche mgbasa ozi iji kwalite ọrụ yana n'ụdị dị iche iche, dabere na ihe ahọpụtara iji kwado ịkpọtụrụ - n'otu n'otu, n'ọtụtụ buru ibu, yana ndị otu ebumnuche.
Akwụkwọ a na-ewepụta na-akpaghị aka na-agụnye ụdị akụkọ ọ bụla, gụnyere ego, ndekọ ego, ọnụ ọgụgụ na iwu, nkwekọrịta nkwekọrịta, na akwụkwọ ọnụahịa. Mgbe ị na-eme ngwa kredit, mmemme a na - ewepụta nkwekọrịta ego na akpaghị aka na MS Word yana nkọwa nke ndị ahịa etinyere na ya na ọnọdụ ịgbazinye ego akwadoro. Mgbe ị na-achọ maka kredit, mmemme a na-agbakọ ụgwọ ego na-akpaghị aka na-atụle ọnụego ọmụrụ nwa, gbanwee ego ya mgbe ọnụego mgbanwe na-agbanwe, ma ọ bụrụ na enyere ego mgbazinye na ya. Usoro akụrụngwa na-edekọ ọnụ ọgụgụ na ihe ngosi niile, gụnyere ọnụọgụ nke ngwa akwadoro na nke jụrụ, nke na-enye ohere ịme atụmatụ dị mma. Dabere na ndekọ ọnụ ọgụgụ, a na-eme mkpesa nke ime na nyocha na nyocha nke ụdị ọrụ niile, nke na-eme ka o kwe omume ịkwalite ogo ha ma hụ na uto bara uru.
Nyocha nke ihe ngosi ugbu a na-enye anyị ohere ịtụle ọrụ ndị ahịa na oge ụfọdụ, ego mgbazinye ego, arụmọrụ ndị ọrụ, mgbanwe site na usoro ịkwụghachi ụgwọ, na ụgwọ isi. A na-enye akụkọ nyocha dị mma na nke na - ahụ anya - tebụl, eserese, na eserese nke na-ahụ mkpa nke ngosi ọ bụla na-eweta uru. Nchịkọta nke ego nwere ike ịhapụ gị inyocha ogo nke pọtụfoliyo kredit, chọpụta ịdị mma nke ụgwọ onye ọ bụla, iji chọpụta ụgwọ na-adịghị arụpụta usoro na ụgwọ iji.
Ndị ọrụ nke USU Software na-arụ ọrụ nrụnye nke mmemme ahụ. Naanị ihe achọrọ maka ngwaọrụ dijitalụ bụ sistemụ arụmọrụ Windows. Mgbe echichi, enwere ngosipụta nke ike nke ngwa maka ịkọwapụta ụgwọ ụgwọ.
Ofdị nke ịrịọ *Zụrụ usoro ihe omumeRịọ ihe ngosiAskjụ ajụjụNyere aka na ngosi-demo
nyocha na akuko nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
aza ajụjụ maka akwụmụgwọ akwụmụgwọ
aza ajụjụ maka ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
aza ajụjụ maka akwụmụgwọ arụmọrụ
aza ajụjụ maka ego mgbazinye ego
na-atụle maka ọmụrụ nwa na-agafe oge na mbinye ego
ịza ajụjụ maka obere oge na ego
ịza ajụjụ maka mgbazinye obere oge
nyochaa na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
aza ajụjụ na ego na Ebe E Si Nweta oru
nyochaa na MFIs
aza ajụjụ na microfinance nzukọ
ịkọọrọ ọmụrụ nwa na mbinye ego
akaụntụ nke mgbazinye ego nke ụlọ akụ
aza ajụjụ nke ndị ahịa na MFIs
aza ajụjụ nke ndị ahịa nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
nzere nke akwụmụgwọ
nyocha nke akwụmụgwọ na mgbazinye ego
aza ajụjụ nke Ebe E Si Nweta ekwenye
nyochaa mmefu nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
nyochaa mmefu na mgbazinye ego na mgbazinye ego
nyochaa mmefu na mgbazinye ego na kredit
ezi ego na mgbazinye ego
nyochaa ego na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
nyocha nke mgbazinye ego enyere
nyocha nke inye ego
nyochaa ego nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
ịkọ ụgwọ ọmụrụ nwa na ụlọ akụ
nyocha nke akwụmụgwọ na mgbazinye ego enyere
ndekọ ego nke mgbazinye ego
nyocha nke mgbazinye ego na ego
nyocha nke mgbazinye ego na ọrụ ha
nyocha nke mgbazinye ego na MFIs
nyocha nke mgbazinye ego nke ndị mmadụ n'otu n'otu
aza ajụjụ nke mgbazinye ego ịkwụ ụgwọ
ndekọ ego nke ọrụ ịgbazinye ego
aza ajụjụ nke ụgwọ ego
ịkwụ ụgwọ maka nkwụnye ego
nyocha nke mgbazinye ego ogologo oge
nyocha nke nzukọ microcredit
ajụjụ maka microfinance
nyocha nke ịkwụ ụgwọ na mgbazinye ego
nyocha nke mgbazinye ego natara na mgbazinye ego
nyocha nke mmezi na kredit na mgbazinye ego
nyocha nke mmezi na mgbazinye ego
usoro nyocha maka ego
mmemme ego maka MFIs
usoro nyocha maka ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
sistemụ arụmọrụ na MFIs
usoro nyocha nke usoro
usoro nyocha nke ego ịkwụ ụgwọ
nyocha na nyocha nke akwụmụgwọ
nyocha nke akwụmụgwọ na ịgba ụgwọ ego
ngwa maka nyocha nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
ngwa maka mgbazinye ego nke mgbazinye ego
ngwa maka ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
ngwa maka MFIs
ngwa maka nzukọ microcredit
ngwa maka microloans
akpaaka maka òtù microfinance
akpaaka nke ajụjụ na MFIs
akpaka akpaaka nke akwụmụgwọ
akpaaka nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
akpaaka nke microloans aza ajụjụ
Kọmputa mmemme maka akwụmụgwọ
Mmemme kọmputa maka ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
Mmemme kọmputa maka MFIs
Mmemme kọmputa maka ụlọ ọrụ microfinance
Kọmputa mmemme maka microloans aza ajụjụ
Njikwa maka òtù microcredit
Njikwa ego na mgbazinye ego
Njikwa nke kredit na-ekwenye
Njikwa ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
Njikwa nke otu nzụkọ ego
Njikwa ịkwụ ụgwọ mgbazinye ego
Overchịkwa nnata nke ịkwụ ụgwọ ego
CRM maka ịdekọ ego
CRM maka nyocha nke mgbazinye ego
CRM maka ndị na-ere ahịa ego
CRM maka ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
CRM maka MFIs
CRM maka ụlọ ọrụ microfinance
CRM maka microloans aza ajụjụ
Usoro njirimara ndị ahịa nke ụlọ ọrụ kredit
Nchịkọta ego nke akwụmụgwọ na mgbazinye ego
Njikwa ụlọ nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
Njikwa dị n'ime MFIs
Iwu njikwa nke ụlọ ọrụ kredit
Esịtidem akara iwu nke MFIs
Nchịkwa na nzukọ ego na kredit
Nchịkwa nke mgbazinye ego nke ụlọ akụ
Nchịkwa nke nkwado akwụmụgwọ
Nchịkwa nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
Nchịkwa nke ego na akwụmụgwọ
Nchịkwa nke mgbazinye ego na kredit
Njikwa nke MFIs
Nchịkwa nke nzukọ microcredit
Nchịkwa nke nzukọ microfinance
Usoro nlekọta maka MFIs
Sistemụ njikwa nke MFIs
Microfinance usoro mmemme
Microloans na-aza ajụjụ
Mmemme ịntanetị maka MFIs
Optimization nke MFIs
Nhazi na usoro nyocha maka ulo oru ego
Nhazi na njikwa ego na akwụmụgwọ
Nhazi nke nzere
Nhazi nke nzinye ego nke kredit
Nhazi nke oru nke microcredit nzukọ
Nhazi nke ọrụ nke MFIs
Nhazi nke oru nke ulo oru microfinance
Sistemụ ịkwụ ụgwọ maka MFIs
Mmemme maka ndị otu microfinance
Mmemme maka ịkọwapụta ego
Mmemme maka ịkọwapụta ego na mgbazinye ego
Mmemme maka ị nweta ego mgbazinye ego
Mmemme maka ịkwụ ụgwọ nke ịkwụ ụgwọ ego
Mmemme maka ndị ahịa nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
Mmemme maka njikwa nke akwụmụgwọ
Mmemme maka ịchịkwa MFIs
Mmemme maka Ebe E Si Nweta
Mmemme maka nkwado nkwado
Mmemme maka ụlọ ọrụ kredit
Mmemme maka ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
Mmemme maka ego na nzere
Mmemme maka ego na mgbasa ego na akwụmụgwọ
Mmemme maka mgbazinye ego
Mmemme maka MFIs
Mmemme maka microloans
Mmemme maka microloans aza ajụjụ
Sọftụwia maka kredit
Software maka Ebe E Si Nweta ajụjụ
Software maka kredit na-ekwenye
Sọftụwia maka ụlọ ọrụ kredit
Sọftụwia maka ịkwụ ụgwọ mgbazinye ego
Sọftụwia maka MFIs
Sọftụwia maka ndị otu microcredit
Sọftụwia maka nzukọ microfinance
Mpempe akwụkwọ maka ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
Mpempe akwụkwọ maka MFIs
Mpempe akwụkwọ maka microloans
Sistemụ maka iji kwado kredit
Sistemụ maka MFIs
Sistemụ maka microcredit nzukọ
Usoro maka microfinance
Usoro maka nzukọ microfinance
Usoro nke ego akwụmụgwọ